Tapitra Ny Hetsipanoherana Lavareny Nataon’i Irom Sharmila, Fa Mitohy Kosa Ny Tsimatimanota Miaramila Any Avaratra Atsinanan’i India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2016 16:50 GMT
Sary tao amin'ny Flickr-n'ny Foibe Amerikàna ao Mumbai. CC BY-ND 2.0
Tamin'ity herinandro ity, nisy lohatenim-baovao nampitony Indiana maro.
Nanapaka hevitra ny hamarana ny enina ambin'ny folo taona nifadiany hanina, zavabita ela indrindra erantany i Irom Chanu Sharmila, fantatra ihany koa amin'ny hoe ‘Iron Lady’ ho an'ny fanjakàna Indiana ao Manipur.
Tamin'ny Novambra 2000 i Sharmila no nanomboka ilay hetsipanoherana tsy mampiasa herisetra, ary ny tena fitakiany dia ny hanafoanana ilay Lalàna (Manome Fahefana Manokana) Ny Tafika Mitampiadiana (AFSPA) izay manome zo tsimatimanota ho an'ny milisy mitampiadiana avy amin'ny fanjakàna eo am-panatanterahana ny andraikiny hifehezana ny hetsik'ireo mpikatroka mafàna fo sy mpitaky fahaleovantena ao amin'ilay faritra.
Nandritra ireo taona rehetra ireo dia notànana tao amin'ny hopitaly iray tao Imphal, renivohitr'i Manipur izy, ary nasiana fantsona famahànana an-terisetra teo amin'ny orony noho ny lalàna iray mandràra ny famonoantena.
‎Tao anaty fanambaràna iray, nilaza izy fa tsapany tsy ho afaka hahazo fandreseana intsony amin'ny alàlan'ny fanaovana fifadiana hanina samirery manoloana ny AFSPA‬.
Napetrany mazava tsara ihany koa ny faniriany hanambady sy hirotsaka ho mpifaninana amin'ireo fifidianana hoavy ao amin'ny faripifidianan'ny fanjakana misy azy, toerana izay iomanany hanohizana ny fanoherany ilay lalàna.
Oooay! 16 taona aty aoriana – natsahatr'i Irom Shamila ny fifadiana hanina. Maniry hifaninana amin'ireo fifidianana hoavy ilay endriky ny fanoherana ao Manipur. 9 Aog, andro farany ifadiany hanina
Fanapahankevitra goavana avy amin'i Irom Sharmila. Tena ho tsaroan'ny rehetra marina tokoa ny tolona nataonao
Tamin'ny Novambra 2000 i Sharmila no nanomboka ny hetsipanoherany rehefa nisy olona 10, nahitàna zazakely roa maty novonoin'ny milisin’ny Assam Rifles (milisy iray ivelan'ny tafika) teo amin'ny toerana iray fiandrasana fiara fitaterana tao akaikin'i Imphal.
Notànana i Sharmila taorian'ny niampangàna azy araka ny Andininy 309 ao amin'ny Lalàna Indiana Famaizana Heloka, noho ny fanatanterahany famonoantena tamin'ny alàlan'ny fanombohana fitokonana tsy hihinana hanina mandritry ny fotoana tsy voafetra.
Navotsotra izy avy eo ary niverenana nosamborina indray isantaona hatramin'ny nanombohan'ilay fitokonany tsy hisakafo, ary nasandratra ho “endriky ny fanoheran'ny vahoaka” tao amin'ilay faritra, toerana izay tsy itiavan'ny vahoaka mihitsy ny governemanta foibe.
Tany ampiandohan'ity taona ity ny fitsaràna iray dia namoaka didy hamotsorana azy avy any am-ponja.
Raha niteraka resabe ny hetsika nataony, tsy isalasalàna kosa fa ireo hery manohana ny governemanta foibe eo ambany fiarovan'ilay Lalàna (Manome Fahefana Manokana) Ny Tafika Mitampiadiana (AFSPA) dia manohy misitraka ny zo tsimatimanota midadasika be rehefa manao ny asany any amin'ilay faritra Avaratra Atsinanan'i India izay kikisan'ny fifandonana (ahitàna an'i Manipur sy Kashmir) .
Tamin'ny 1958 no nahazo alàlana ho ara-dalàna tao Manipur ny AFSPA.
Ho fanamarihana ny faha-dimampolo taonan'ilay lalàna, ny 2008, nanoratra i Mukul Sharma tao amin'ny Kafila.org hoe:
Lalàna iray mihatra any amin'ny faritra maro ao avaratra atsinanana io, izay manome fahefàna manokana ireo milisy mitampiadiana any amin'ny toerana iray lazaina ho toy ny “faritra mikorontana”. Kanefa, raha raisin'ny fanjakàna sy ireo manampahefana ao amin'ny tafika ho tena ilaina ny AFSPA mba hiarovana ny tsy hisian'ny korontana anatiny, hitazonana ny maha-tokana ny firenena, hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana sy ny fihokoana, ary hiarovana ireo sisintany saropady, dia manohitra mafy azy io kosa ireo vondrona mpiaro zon'olombelona, ireo fikambanam-behvavy sy vondrona politika, satria hita izy io ho toy ny fanamoràna ny fanitsakitsahana tafahoatra ny zon'olombelona, ny fanaovana tsimatimanota, ny fanolànana ary ny fampijaliana sy fampanginana ny fanoherana demaokratika.
Voarakitra daholo ireo fanitsakitsahana ataon'ny tafika miasa ao amin'ilay faritra na eo aza ny tsy firaharahian'ireo gazety nasionaly .
Manoratra ho an'ny tranonkala Raiot tamin'ny taona lasa, nanamarika i Lalit Shukla hoe :
itsakitsahan'ny AFSPA ireo zo fototra omen'ny lalam-panorenana hanana fiainana, halalaka miteny sy maneho hevitra, hivory am-pilaminana, hivezivezy malalaka, hanao izay asa tiana, ary hahazo fiarovana manoloana ny fisamborana fahatany sy ny fahalalahana hanaraka izay finoana tian'ny tena, araka izay voarotra ao amin'ny Andininy faha-21, 14, 19, 22 sy 25 ao amin'ny Lalam-panorenana.
Tsy misy ilàna ny fifanakalozana hevitra mihitsy, fanafoanana no tiako: ‘Jereo i Irom Sharmila, maherifon'ny tena fiainana (sy ny seho an-tsehatra)
Tamin'ny Novambra 2010 i Anjuman Ara Begum dia nanoratra andiany iray ahitàna fizaràna telo tao amin'ny Twocircles.net nanomezana ny antsipirihany tamin'ny hetsipanoheran'i Sharmila.
Ny ampahany faharoa amin'ilay andiany dia mifantoka amin'ireo “olan'ny vonoolona mbola “tsy voavaha” tao Manipur, miainga hatrany amin'ny 1984 hatramin'ny 2000, fotoana nanombohan'i Sharmila ny hetsika.
Vao haingana, tao anaty didim-pitsaràna iray horaketin'ny tantara, neken'ny Fitsaràna Antampony Indiana ny hampanao fanadihadiana ny sasany amin'ireo tranga 1.528 voalaza ho famonoana ivelan'ny lalàna nataon'ny hery mitampiadiana tao Manipur nanomboka ny 2000 hatramin'ny 2012.
Nanipika ihany koa ilay fitsarana fa tsy misy zo tsimatimanota nomena ireo hery mitampiadiana miasa eo ambanin'ilay lalàna AFSPA.
Ankita Mukhopadhyay ao amin'ny Being Indian manontany tena momba ny tsy firaharahiana faobe ataon'ireo Indiana manoloana ny tolona nataon'i Sharmila:
Heveriko fa fotoana izao hitehafantsika azy sy ny tolon'ireo Manipuris, fa tsy tokony hody fanina amin'io vaovao io ho toy ny raharaha isanandro ihany. Satria tsy izany io.
Vishnu Pillai ao amin'ny Youth Ki Awaaz manoratra hoe :
Tsy niraharaha azy ireo media nasionaly. Toy ny fety iray fankalazàna no nampiasàn-dry zareo ny fifadiany sakafo, isantaona, herintaona, roa, telo tafakatra hatramin'ny dimy ambin'ny folo. Avy eo adinon'izy ireo ilay izy. Tsy nanosika velively izay zavatra nokatsahany ry zareo – ny hanafoana ny AFSPA. Ny fifadiana hanina no nananganan-dry zareo tantara, fa tsy izay antony nifadiany hanina. Ilay mpitondra hafatra no nasongadiny fa tsy ilay hafatra nampitainy. Angamba mety mampitombo ny isan'ny mpanjohy an-dry zareo izany.
Maodelin'ny demaokrasia i Irom Sharmila
Pao-tsatroka ho an'i Iron Lady na dia tsy nahavita nanafoana ny AFSPA aza izy, fa antsika ny tsy fahombiazana
Ho an'ireo izay mihevitra fa tapitra teo amin'i Irom Sharmila ny tantara/fitaterana ny momba an'i Manipur, jereo ireo sary arakaraky ny itohizan'ireo hetsipanoherana~tsy voavaha
Tamin'ny fiarahabàna ny fanapahankevitra noraisin'i Sharmila hampiato ny fifadiany hanina fa kosa mitoetra ho mavitrika hatrany amin'ny politika, ny “Save Sharmila Solidarity Campaign (SSSC)” dia nanamarika ilay fiandrasana ela ny hisian'ny zo fototra ao Manipur, miaraka amin'ireo fanjakàna hafa ao avaratra atsinanana sy Kashmir, toerana itohizan'ny fihorohoroan'ny fiainan'ny vahoaka noho ny ataon'ny tafika.
Ny fanànana ny fahefana rehetra sitrahan'ny AFSPA, ny fisian'ireo andinin-dalàna hafa tsy mijery ny maha-olona (toy ilay Lalànan'ny Faritra Misahotaka, izay nampiharina tao Manipur tamin'ny 1980) ary ny tsy fisian'ny rafitra iray hitànana ireo miaramila tsy voafehy mba ho tomponandraikitra, dia mitondra ho amin'ny fametrahana endrika hery tsy an-drariny iray mandravarava.
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Aparna Ray